Todobo maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood oo cunatada ka soomtay. – Radio Daljir
Todobo maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood oo cunatada ka soomtay.
Laascaanood,Dec,20 -Todobo maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood ayaa ku dhaqaaqay talaabo ay cuntada kaga soomayaan,kadib markii ay sheegeen in aanay jirin wax maxkamad ah oo loo soo taagay dambiyada loo haysto inay galeen.
Maxaabiistan oo afar ka mid ah loo soo xiray inay dilal ka gaysteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ay ku jiraan xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood mudo 18-bilood ah,waxaana wararku ay sheegayaan in maanta ay gashay maalintii lixaad oo ay cuntada ka soomaan.
“Waxaa jira maxaabiis gaaraysa todoba maxbuus oo ku xiran xabisga Laascanood oo cuntada kasoomay,waxayna ka cabanayaan maxkamad la’aan 18 bilood ay xabsiga ku jiraan”ayuu yiri taliyaha xabsiga lagu xiray maxaabiistan.
Taliyaha ayaa dhinaca kale sheegay arintan inay u gudbiyeen maamulka gobolka Sool iyo taliska qaybta booliska ee gobolka isagoona sheegay inay ka gaabsadeen inay arintan ka hadlaan ama ay wax ka qabtaan.
Dhinaca kale qaar ka mid ah ehelada ay ka dhasheen maxaabiistan cuntada kasoomay ayaa u sheegay Radio Daljir maxaabiistan inay go’aansadeen inay naftooda dilaan hadii aysan helin sharci cadaalad ah.
Xabisga dhexe ee degmada Laascaanood ayaa lasoo sheegayaa inay ku jiraan maxaabiis badan oo ay qabqabteen ciidamada Somaliland ee jooga magaalada Laascaanood kuwaasi oo aan helin xuquuqdii ay lahaayeen dadka maxaabiista ah ee lasoo qabto.